8 Amazing Mega rụrụ na China | Akụkọ Njem
8 Amazing Mega rụrụ na China
Maria | | China, Ihe ị ga-ahụ
A maara nke ọma maka nnukwu ụlọ na China. Ọ bụghị naanị n'ihi na ọ na-enye ha ohere igosipụta ikike nke injinia mba, kamakwa n'ihi na n'otu oge ahụ, ha mepụtara ihe owuwu tozuru oke ịghọ ebe nkiri ndị njem nleta dịka Eiffel Tower ma ọ bụ San Francisco Bridge.
Ebube mega nke ewepụtara na mba Eshia bụ akwa mmiri gbagoro na 218 mita n'ofe ndagwurugwu na mita 488 n'ogologo mpaghara Hebei. N'ịbụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Bailu Group wuru, ihe ngosi nke ihe dị ka mmadụ 3.000 bịara njem nleta ahụ bụ ndị nwere ike ịhụ n'onwe ha ihe ọ dị ka ije ije na akwa mmiri dị n'etiti ugwu abụọ dị na Hongyagu Natural Park.
Site na usoro ndị a, Hongyagu bụ akwa kachasị ogologo n'ụwa, nwere ike iguzogide ala ọma jijiji ruru 6 na oke ifufe nke ike 12 na ọnụ ọgụgụ Beaufort. Ugbu a, olee akwa mmiri ndị ọzọ ma ọ bụ nnukwu mega China nwere ike imebi ndekọ? Anyị na-achọpụta ha n'okpuru.
1 Àkwà Mmiri Zhangjiajie
2 Àkwà Mmiri Mmiri Qingdao
3 Guangzhou Underground Line
4 Àkwà Mmiri Baipanjiang
6 Àkwà Aizhai
7 Karakorum, okporo ụzọ kachasị elu
Àkwà Mmiri Zhangjiajie
Ruo mgbe e hiwere Hongyagu Bridge, nke kachasị ogologo n'ụwa dị na Zhangjiajie Nature Park, ihe owuwu 430 ogologo na 300 mita elu. Ọ dị na Zhangjiajie Natural Park, nke dị na Hunan, nke amarala kemgbe 1992 dị ka Ebe Ihe Nketa Worldwa. site UNESCO, ịbụ otu n'ime ndị kacha eleta na China.
Àkwà Mmiri Mmiri Qingdao
N'ime Jiaozhou Bay, e wuru Bridge Qingdao, nke kachasị ogologo na ụwa. Ihe owuwu ya wepụrụ ihe ndekọ ahụ site na akwa mmiri ọzọ nke China, nke dị na Hangzhou Bay bụ nke e lere ruo ugbu a dị ka nke kachasị ogologo n'ụwa n'ụwa mmiri mmiri, nke dị kilomita 36 n'ogologo.
Igwe a nwere ogologo kilomita 42,5 ma nwee okporo ụzọ isii nke okporo ụzọ na-agagharị na ụzọ abụọ. O nwere pylons karịrị 5.200 na imepụta ya chọrọ nde nchara na nchara.
Ugbu a n'akụkụ Osimiri Qingdao, a na-ewu obere agwaetiti na-adịghị arụ ọrụ nke na-eje ozi dị ka ebe izu ike maka ndị njem, ka ha wee nwee ike ịgbara mmanụ ụgbọala ha, rie nri ma ọ bụ zụọ ahịa.
Guangzhou Underground Line
Ọwara kachasị ogologo na ụwa maka njem ọha na eze dị na Guangzhou, obodo ọzọ nke nnukwu obodo dị na ndịda obodo ahụ. Igwe a mepere emepe na-eme ka o kwe omume ịga njem site na ụzọ ụgbọ oloko 60 kilomita na-enweghị sọfụ.
Àkwà Mmiri Baipanjiang
Ugwu Beipanjiang adighi adighi nma nye ndi nwere oke egwu. Ọ dị narị mita ise na iri isii na ise n’elu osimiri Nizhu, n’ebe ndịda obodo ahụ, wee jikọta ógbè Yunnam na Guizhou n’ime awa abụọ. Mgbe ochie, enwere obodo ndị jiri ụgbọ ala were awa ise gafee.
Foto ndị enwere ike ịpụta site na gburugburu Beipanjiang Bridge dị egwu. Alụlụụ dị n’agbata ugwu na-agbasa n’ofe ala dị ka a ga-asị na ọ chọrọ ịmakpu akwa mmiri ahụ a mụrụ n’etiti nkume.
Foto site na Rail Travel
Àkwà mmiri a nwere aha nke ọdụ ụgbọ okporo ígwè kasị elu n'ụwa. Emeghere ya na 2001 ma dị na Liupanshui. N’afọ 2009, ọ tụfuru aha ya bụ akwa mmiri toro oke n ’ụwa mana ọ ka nwere ihe ndị e kwuru n’elu
Pụrụ iche aha kwesịrị usoro a gbasoro maka owuwu ya, nke akọwapụtara dịka oke amamihe. Ihe kpatara ya bụ na kama iji ụlọ elu abụọ na-adịru nwa oge na arụ ọrụ ọ bụla wuo ụta ahụ, a rụrụ ya n'akụkụ abụọ na arụ ọrụ ụgha, nke ọ bụla n'otu akụkụ nke ndagwurugwu ahụ. Ikpo nke mbụ na njedebe ọ bụla jere ozi dị ka mkpanaka taị.
Ozugbo ọkara nke arches gwụchara, ikpo ndị ahụ agbanweela 180º ruo mgbe ha chere ihu na gburugburu. Mgbe ahụ e kekọtara akụkụ ahụ ọnụ wee wuo bọọdụ ahụ na akụkụ ndị ọzọ fọdụrụ.
Ọ bụ ihe ịtụnanya nke injinịa obodo n’obodo Jishou kwụsịtụrụ n’elu Osimiri Hunan Dehang 355 n’elu ala. Na mita 1.176, ọ na-ejikọ nsọtụ nke ọwa abụọ nke mejupụtara okporo ụzọ Jishou-Chadong, nke e wuru n’elu ndagwurugwu mara mma.
Karakorum, okporo ụzọ kachasị elu
Iji mezuo post site na elu anyị ga-ekwu maka Karakorum, okporo ụzọ awara awara na mega-arụ na mita 5.000 nke jikọtara ọdịda anyanwụ China na ugwu Pakistan site n'otu n'ime ebe kachasị dị egwu ma dị egwu nke kọntinent ahụ ka ọ na-agafe nnukwu ugwu atọ dị ka mpaghara Karakorum, Pamir na Himalayas.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ụzọ dị n'okporo ụzọ awara awara nke Karakorum bụ akụkụ nke Silk Road n'oge gara aga ma bụrụ nke a na-ahụta ugbu a dị ka akara nke mmekọrịta na ọbụbụenyi n'etiti mba abụọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » 8 Amazing Mega rụrụ na China
Ihe ịga leta Czech Republic